အရင်ကဆိုရင်များအတွက် WINDOWS 8 ကို - WINDOWS ကို - 2019
ဤဆောင်းပါး၌ငါလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်စတင်မည် Windows 8 ကိုအများဆုံးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူသင်ခန်းစာများအတွက်ဘယ်အချိန်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့် operating system ကိုအားဖြင့်မကြာသေးမီကပေးတော်မူ၏။ တစ်လျှောက်လုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, 10 သင်ခန်းစာများသစ်ကို operating system နဲ့ကအတူလုပ်ကိုင်၏အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု. ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည် - ထို application များနှင့်အတူအလုပ်, ကနဦး Screen, desktop ပေါ်မှာဖိုင်များ, သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူလုံခြုံအလုပ်၏အခြေခံမူ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ :. က Windows 8.1 အတွက်အလုပ်လုပ်6နည်းလမ်းအသစ်များကို
Windows 8 ကို - ပထမအသိအကျွမ်း
Windows 8 ကို - နာမည်ကြီး၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း operating system ကို မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှတရားဝင် 26 အောက်တိုဘာလ 2012 ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရောင်းချသွား၏။ ဒီ operating system ကို၌ကယခင်အစီအစဉ်ကိုဗားရှင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်တီထွင်မှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို Windows 8 ကို install လုပ်ပါစဉ်းစားနေတာ, ဒါမှမဟုတ် operating system ကိုအတူကွန်ပျူတာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်ကအသစ်သည်အဘယ်အရာတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
operating system, Windows 8 ကိုသငျသညျဖွယ်ရှိနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောတစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်းအားဖြင့်ရှေ့ပြေးခဲ့သည်:
Windows7ကို (2009 ခုနှစ်ဖြန့်ချိ)
Windows Vista က (2006)
Windows XP ကို ​​(2001 ခုနှစ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်နေဆဲအများအပြားကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်)
ထိုအချိန်တွင်ကို Windows အပေါငျးတို့သယခင်ဗားရှင်းအဓိကအား desktop နှင့် laptop ပေါ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ Windows 8 ကိုလည်းတက်ဘလက်များပေါ်တွင်အသုံးပြုရန် version တစ်ခုရှိ - ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ထဲမှာ, operating system ကို interface ကိုတစ်ဦးထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့အဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
operating system ကို ဒါဟာကွန်ပျူတာအားလုံး devices များနှင့်အစီအစဉ်များစီမံခန့်ခွဲ။ ကွန်ပျူတာ operating system ကိုမရှိရင်အနှစ်သာရအတွက်ကြောင့်အချည်းနှီးဖြစ်လာသည်။
Windows ကိုအခုမှစ 8 သင်ခန်းစာများ
Windows 8 ကို (ဒီဆောင်းပါးအပိုင်း 1) မှာပထမဦးစွာကြည့်
Windows 8 ကိုဖို့အဆင့်မြှင့် (အပိုင်း 2)
အပိုင်း (3) စတင်
Windows 8 ကိုအပိုင်း (4) ၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းခြင်း
စတိုးဆိုင် (အပိုင်း 5) မှ Installing applications များ
ယခင်ဗားရှင်းကနေ Windows 8 ကိုအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောကဘာလဲ
Windows 8 မှာတော့အသေးစားနှင့်မျှမျှတတကြီးမားသောနှစ်ဦးစလုံးစသောအပြောင်းအလဲ၏အတော်လေးတွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဤပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည်:
ဒီဇိုင်း interface ကို
Enhanced လုံခြုံရေး features
Windows 8 ကနဦးမျက်နှာပြင် (ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
သငျသညျကို Windows 8 မှာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာ - က operating system ကိုအရင်ဗားရှင်းထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝ updated interface ကိုလည်းပါဝင်သည်: အကို Start screen ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအုပ်ကြွပ်နှင့်တက်ကြွသောထောင့်။
မျက်နှာပြင် (ကနဦးမျက်နှာပြင်) Start
Windows 8 ရဲ့အဓိကမျက်နှာပြင်ကို Start screen ကိုသို့မဟုတ်သင့်လျှောက်လွှာအုပ်ကြွပ်၏ပုံစံကိုပြသသောအပေါ်ကနဦးမျက်နှာပြင်ဟုခေါ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ပင်မမျက်နှာပြင်၏အသွင်အပြင်, အမည်ရ, အရောင်အစီအစဉ်, နောက်ခံပုံရိပ်, နှင့်အုပ်ကြွပ်၏တည်နေရာနဲ့အရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက် tile ကို Windows 8 ကို
Windows 8 ကိုအတွက် apps များကိုအချို့သည်ဥပမာ, အိမ် screen ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန်ပြီးခဲ့သည့် e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်၎င်းတို့၏နံပါတ်များ, ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, etc တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည် သင်တို့သည်လည်းလျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ tile ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
Active ကို Windows အတွက် (ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ) 8 ထောင့်ချိုး
Windows 8 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အညွှန်းအကြီးအကျယ်တက်ကြွထောင့်များအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ တက်ကြွစွာထောင့်သုံးစွဲဖို့, တဦးတည်းဒါမှမဟုတ်သင်အခြို့သောလုပ်ရပ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြား panel က, ဖွင့်လှစ်သောမျက်နှာပြင်၏ထောင့်အတွက် mouse ကိုရွှေ့။ ဥပမာအားဖြင့်, အခြား application ကိုပြောင်းရန်ဖို့, သင်ဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်ဖို့ mouse ကိုကိုင်ထားနိုင်ပြီးထိုသူတို့အကြားအပြေး applications များနှင့် switch ကိုကြည့်ဖို့မောက်နှင့်အတူကကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်တစ်ဦးတက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, သင်ဘယ်ဖက်ကနေသူတို့ကိုအကြားပြောင်းညာဘက်လက်ချောင်းပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
sidebar Charm bar ကို
sidebar Charm bar ကို (ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
ငါရုရှားအပေါ် Charm ဘားဘာသာပြန်ဆိုဖို့ဘယ်လိုနားမလည်ဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းစွာကတစ် sidebar မှာလမ်းကပဌနာလို့ပဲ။ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ setting များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအတော်များများကအထက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာမောက်ရှိခြင်း, အတိအကျဒီ Sidebar မှာယခုသင်ရနိုင်ရာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
လူအတော်များများဟာယခုကွန်ယက်တွင်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌၎င်းတို့၏ဖိုင်တွေနဲ့အခြားအချက်အလက်သိမ်းဆည်းထား။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ၏ SkyDrive ကိုဝန်ဆောင်မှု - ဒီလိုလုပ်ဖို့တလမ်းတည်း။ Windows 8 ကို features တွေ SkyDrive ကိုသုံးစွဲဖို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Twitter ကဲ့သို့သောအခြားကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုများ, ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကို Microsoft အကောင့်ကို အသုံးပြု. Log
အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အကောင့်တစ်ခုအတွက်ကိုသင်အခမဲ့ Windows Live Microsoft account တစ်ခုနှင့်အတူဝငျရောကျနိုငျသညျ။ သင်ယခင်က Microsoft account တစ်ခုစံချိန်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါလျှင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို့နောက်အားလုံးသင်၏ SkyDrive ဖိုင်များ, အဆက်အသွယ်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များထို့အပြင်ကနဦးမျက်နှာပြင် Windows 8 နှင့်အတူညှိနေကြတယ်, သငျသညျယခုတောင်မှ Windows 8 ကိုနှင့်အတူအခြားကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ကို log အဲဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည် အားလုံးသင့်ရဲ့အရေးကြီးသောဖိုင်များနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းရှင်းလင်းရေး။
ပြည်သူ့ app ကို (ချဲ့ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ) သို့ Recorder တိပ်
အိမ် screen ပေါ်မှာနောက်ဆက်တွဲပြည်သူ့ (ပြည်သူ့) သင်က Facebook အကောင့်များ Skype ကို (လျှောက်လွှာကို install ပြီးနောက်), Twitter, Google ကနေ Gmail ကိုနှင့် LinkedIn တို့နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာကလူလက်ျာကို Start screen ပေါ်မှာ, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းထဲကနေ (မည်သည့်အမှု၌, Twitter နဲ့ Facebook ကိုမှနောက်ဆုံးပေါ် updates များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် Vkontakte နှင့် Odnoklassniki သီးခြား applications များဖြန့်ချိနေကြပါတယ်ရှိသည်ကအလုပ်လုပ်တယ်ကိုလည်းမွမ်းမံမှုများအပေါ်အုပ်ကြွပ်အသက်ရှင်နေထိုင်ပြသရာ အိမ်မျက်နှာပြင်) ။
Windows 8 သည်အခြား features တွေ
ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မျက်မှောက်ရေးရာ desktop ပေါ်မှာ
Windows 8 Desktop ကို (ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
ဒါဟာနေဆဲဖိုင်များ, ဖိုလ်ဒါနှင့်အစီအစဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Microsoft ကပုံမှန် desktop ကိုမဖယ်ရှားခဲ့ပေ။ သို့သျောလညျးသော graphical သက်ရောက်မှုတစ်အရေအတွက်, Windows7နဲ့ Vista ကအပြေးကွန်ပျူတာများကိုမကြာခဏဖြည်းညှင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရာ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြောင့်ဖယ်ရှားခဲ့ကြပြီ။ ပင်အတော်လေးအားနည်းနေကွန်ပျူတာများအပေါ်တော်တော်အစာရှောင်ခြင်းအပြေး desktop ပေါ်ကနောက်ဆုံးရေးသားချိန်။
Start button ကို၏မရှိခြင်း
အဆိုပါအကျွမ်းတဝင် Start button ကို၏မရှိခြင်း - ထို operating system ကို Windows 8 ကိုထိခိုက်စေခြင်းမှအထင်ရှားဆုံးပြောင်းလဲမှု။ နှင့်အညီ, အိမ် screen နှင့်ဘေးထွက် panel ကနေယခင်ကခလုတ်ကိုဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခဲ့ကြသည်သမျှသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတုန်းပဲလက်လှမ်းဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း၎င်း၏မရှိခြင်းအများအပြားမကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖြစ်ကောင်းဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်, အရပျအပျေါကို Start button ကိုပြန်ပို့မည့်အမှုမှာအထူးထူးအပြားပြားအစီအစဉ်များကိုလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းဤသူကို အသုံးပြု. တာပါ။
antivirus ကို Windows 8 Defender (ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
Windows 8 မှာတော့ antivirus ကို Virus, Trojan တွေနဲ့စပိုင်ဝဲထဲကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် "Windows Defender" (Windows Defender), ကိုတည်လေ၏။ ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်, တကယ်တော့, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပရိုဂရမ် Windows 8 သတိပေးချက်သို့ built Microsoft Security Essentials antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင်ဖို့လိုအပ်မယ့်အခါ, တစ်ဦးပေါ်နေသည်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာဘေ့စမှန်မှန် updated ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်က Windows 8 ကိုတခြား antivirus ဆော့ဖ်ဝဲမလိုအပ်ကြောင်းကိုရှာဖွေပေမည်။
ငါ Windows 8 ကို install လုပ်သင့်တယ်
သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ် Windows 8 ကို Windows ၏ယခင်ဗားရှင်းနှိုင်းယှဉ်အပြောင်းအလဲများကိုအများကြီးခံခဲ့သည်။ အများအပြားကတူညီတဲ့ Windows7ကိုရဲ့ငြင်းခုန်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းငါသဘောမတူဘူး - သူကအဆုံးစွန်သော Vista ကနေမတူညီတဲ့ကြောင်းတူညီသောအတိုင်းအတာအထိ Window7ကနေမတူညီတဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော operating system ကိုပါပဲ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးသစ်ကို operating system ကိုကြိုးစားရန်လိုလိမ့်မည်, Windows7တွင်ဆက်နေရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကို Windows 8 နဲ့ PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုရလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်နေ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက Windows 8 ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုနှင့် operating system ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏ installation အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။